अक्स्फोर्ड भ्याक्सिन ग्रुपका निर्देशक भन्छन्- नेपालमा खोप ढिलो भएकोमा दु:खी छु – Nepal Press
२०७८ जेठ १३ गते १७:५६
काठमाडौं । अक्स्फोर्ड प्रोफेसर एन्ड्री जे. पोलार्डले नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप ढिलो भएको देख्दा आफू दु:खी भएको बताएका छन् ।
नेपाली टाइम्समा आलेख लेख्दै प्रोफेसर पोलार्डले गुनासो गरेका हुन् । उनी अक्स्फोर्ड भ्याक्सिन ग्रुपका निर्देशक हुन् । सन् २०२० को अप्रिल २३ बाट शुरू भएको अस्ट्राजेनेका खोपको क्लिनिकल ट्रायलको नेतृत्व उनैले गरेका थिए । पोलार्डले बेलायत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा २४ हजार स्वयंसेवकसमेत परिचालन गरेका थिए ।
‘यो वर्ष म पर्वतारोहीको रूपमा नेपाल गएको ३० वर्ष पुग्छ’, उनी लेख्छन्, ‘मैले जब अस्ट्राजेनेका भ्याक्सिनको पहिलो डोज काठमाडौमा लाएको देख्दा मलाई अत्यन्तै गौरव लागेको थियो । तर, थप आपूर्ति नभएको सुन्दा म दु:खित भएको छु ।’
पाटन अस्पतालको रिसर्चरहरूसँग १६ वर्षनजिक रहेर काम गरेको उनले बताएका छन् ।
#प्रोफेसर एन्ड्री जे. पोलार्ड
प्रकाशित: २०७८ जेठ १३ गते १७:५६